မမ အမြဲပြုံးပါ (လူကလေး အတွက် မွေးနေ့ကဗျာ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မမ အမြဲပြုံးပါ (လူကလေး အတွက် မွေးနေ့ကဗျာ)	24
မမ အမြဲပြုံးပါ (လူကလေး အတွက် မွေးနေ့ကဗျာ)
Posted by သူကလေး on Apr 6, 2013 in Creative Writing, Poetry | 24 comments
မမပြုံးနေရင် အပြစ်ကင်းပြီး အရမ်းချစ်စရာကောင်းတာမို့
မမ သီချင်းဆိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့အခါ ညီမလေးနဲ့ အတူတူသွားဆိုပါ
သီချင်းဆိုရင်း မမကျမယ့်မျက်ရည်တွကို သုတ်ပေးခွင့်ရတဲ့သူ ညီမလေးဖြစ်ချင်လို့ပါ
မမ စိတ်အရမ်းတိုပြီး ပေါက်ကွဲချင်တဲ့အခါ ညီမလေးကိုအော်ပါ
မမ ညီမလေးနဲ့ အတူတူ အပြင်ကိုသွားပါ
လမ်းပေါ်မှာတွေ့သမျှလူတိုင်းကို စာနာကူညီရိုင်းပင်းတတ်တဲ့ မမရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကို ညီမလေးလေ့လာသင်ယူချင်လို့ပါ
မမ ညီမလေး မလိမ္မာတာများရှိရင် ညီမအရင်းသဖွယ် ပြောဆိုဆုံးမပါ
မမလို ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုး ညီမလေးလည်ဖြစ်ချင်လို့ပါ
မမ အိမ်ကထမင်းချိုင့်ထည့်ပေးတဲ့ဟင်းကိုကြိုက်တဲ့အခါ ဂျီကျပါ။
ဟင်းမကောင်းရင် ကလေးလေးလိုပဲ စိတ်ညစ်နေတတ်တဲ့ မမကို ညီမလေး ချော့မော့ချင်လို့ပါ။
မမရယ် … လောကဓံဆိုတာ ဒီလိုပဲ အကောင်းရှိသလို အဆိုးရှိမှာပဲ
မမဘေးမှာ ဆိုးတူကောင်းဖက် ညီမလေးရှိနေပေးခွင့်လေးရချင်လို့ပါ
မမပြုံးလိုက်တိုင်း လောကကြီးက ပိုသာယာသွားသလိုပဲ ….
ရိုးသားလွန်းတဲ့စံပယ်ဖြူတွေထက် မမအပြုံးက ပိုအပြစ်ကင်းတယ် ………..
မမ … အမြဲပြုံးပါ။
(လူကလေးရဲ့ ယနေ့မှာကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးပါ … အားလုံးလဲ လူကလေးကို မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ကြပါအုံးနော်)
My personalities is just the way I am &
My attitude depends on who u are View all posts by သူကလေး →	Blog
ကီလိုဇူးလူးဝီစကီ says: Happy Birthday to you, Lu Ka Layy.
လူကလေး says: မွေးနေ့ ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ ဝီစကီရေ..
ဗုံ ဗုံ says: ဟေးး ဦးကြီးလူကလေး ယခုမွေးနေ့မှ စ၍ နောင်နှစ်များစွာတိုင် ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်းးးး မုန့်ကျွေးလို့ရပါပြီရှင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 272
လူကလေး says: မွေးနေ့ဆုတောင်းအတွက် ဗုံ့ကို ကျေးဇူး နှော်..
မုန့်စားပါ ရော့အင့်.. ပါးစပ်ဟလေ.. . အာ .. ကျယ်ကျယ်ဟ. . အ.. အော် .. ကျပေါ့.. တော်ပြီ .. . တစ်ခါပဲရမယ်..
ရွာသူ jujuma . says: ဒီလို အားကိုးရတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက် ရရင် မမ အမြဲ ပြုံးနေမိမှာပါ .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 272
လူကလေး says: ဟုတ်ပ . ju ရေ.. .. ဘာအားကိုးရသလဲမမေးနဲ့. .. ကားလမ်းတောင်မကူးတတ်တဲ့သူကလေးပေါ့ဗျာ. .
GaviaGirl says: အဟမ်း… လူကလေးကို တိုးတိုးလေးမေးကြည့်.. ညက ၁၂ နာရီ ၂ မိနစ်မှာ ဘာထူးခြားလဲလုိ့..ဟိဟိ..
တော်လိုက်တဲ့ သူကလေး… မမမွန်တောင် မွေးနေ့ပို့စ်ကို သတိမရ၀ူး.. ခိခိ.. နာတော့ ဆဲခံထိတော့မယ်..
Happy Birthday ပါ ချစ်သယ်ရင်းကြီး… ဒီထက်မက ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ… စာမွဲလည်း ဖြေနိုင်ပါစေ.. နာတို့ကိုလည်း မုန့်များများဝယ်ကျွေးနိုင်ပါစေ… ချစ်တဲ့..
ရွှေ ကြည် says: အမွန်သူငယ်ချင်းလား လူကလေး က အတူဆုတောင်းပေးပါတယ် ပျော်ရွှင်ပါစေ လူကလေး
လူကလေး says: ကျေးဇူး တင်ပါ့ ကြည် ရေ…. ကြည်ဆိုလို့ မနက်စာ ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြားတောင် စားချင်လာပြီ..
ရွှေ ကြည် says: ပဲပြုတ် နဲ့ နံပြား ကို ကြက်သွန်ကြော်ဆီချက်လေးနဲ့သေချာလုပ်ပေးပါ့မယ် လူကလေးနဲ့ လူကလေးညီမ သူကလေးတို့ရေ အခုတော့မဟုတ် Was this answer helpful?LikeDislike 4116
Foreign Resident says: Happy Birthday လူကလေး
Green Rose says: ကဗျာလေးက မမအတွက် စပ်ထားတာပေမယ့် ကဗျာထဲမှာ ညီမလေးက ပိုပြီးရုပ်လုံးကြွနေတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ညီမလေးရဲ့ မမ အပေါ်မှာထားတဲ့ ချစ်ခြင်းက မမကိုအမြဲပြုံးနေနိုင်စေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် Green Rose သာ မမနေရာမှာဆိုရင် ဒီလိုညီမလေးရဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့ အလိုလိုက်၊ အလိုက်သိတာလေးတွေ လိုချင်တာနဲ့ မငိုချင်ရင်တောင် ခဏခဏ ငိုမိမယ်ထင်တယ် ……
Happy Birthday ပါ မမလူကလေးရေ
လူကလေး says: ညီမလေးအရင်း အတိုင်းပါပဲတဲ့ဗျာ ..
MaMa says: ကိုယ့်ကိုများ ပြောတာလားလို့ ဒီလိုညီမလေးရဲ့ မမ ကတော့ အမြဲပြုံးနေမှာ မြင်ယောင်မိသေးးးးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6551
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အွန် ….
လူကလေး က ငယ်တယ် မှတ်နေတာ …
ဟုတ်မှ ဟုတ်ဘဲနဲ့ ….
ဟက်ပီး ဘက်ဒေးပါနော့ ….
ဟိုတစ်ယောက်လိုပဲ ကျုပ်လည်း ကဗျာ စပ်ကြည့်မယ် …
မမ အီးပေါက်ချင်တဲ့ အခါ
လွှတ်သာ ပေါက်ပစ်လိုက်ပါ …
အနားကနေ မမအီးအီးကို ရှူရှိုက်ဖို့ မွေးဖွားလာတာပါ ..
ဝှီးးးး ကြက်သွန်ဖြူ အီးဘဲ .. နံလိုက်ဒါ …. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 241
အရိပ်စစ် says: Happy Birthday ပါ
စံပယ်ဖြူတွေထက် အပြစ်ကင်းတဲ့ မမ အပြုံးလေး ထာဝရလန်းဆန်းပါစေနော်
surmi says: မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုလူလေး ရေ
ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးကိုလည်း အားပေးသွားပါတယ်ဗျာ ။
ခင်ခ says: လူကလေးရေ မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ကာ လိုရာဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေ။
မွေးနေ့ပိုစ်တင်ပေးသူ သူကလေးကိုလည်း ကျေးဇူးပါနော်။
ဦးဦးပါလေရာ says: ဒီမွေးနေ့မှသည် ရာသက်ပန် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေကွယ်။
mashwetote says: မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
မောင် ပေ says: လူကလေး
အရီးခင်လတ် says: သူကလေးရဲ့ လူကလေး ဆိုတာ မိန်းကလေးကိုး။
သူကလေး says: သူကလေး ကဗျာကိုအားပေးပြီး လူကလေးအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြတဲ့သူငယ်ချင်း
အကိုအမ ညီမလေး မောင်လေး အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 272
လူကလေး says: ကဗျာ လေး ရေးပေးတဲ့ ညလေး သူကလေး ရေ… ဘူကမှ အဲလို ဗျာ လေး ရေးပေးဖူးတော့ …. ဖတ်ရင်းနဲ့တောင် ငိုမိပါသေး.. အဟင့်.. ရွှတ်.. ဖတ်.. ကျေးဇူး ကမ္ဘာ ပါ ညလေး.. မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့သူတွေကို လည်းကျေးဇူး ပါ.. နောက်ကျတဲ့ reply မို့ ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါကုန်..